Chii chiri Kupinza? Kuumba Sangano uye LLC Yakatsanangurwa
Kupinza chiito chekuumba nyowani "yemubatanidzwa" bhizinesi chimiro chinopa iro rimwe bhizinesi, mutero, uye zvakanakira zviri pamutemo kune varidzi varo. Nechiitiko chekubatanidza, rakaparadzaniswa repamutemo sangano rinoumbwa rinogona kuve yako chivakwa, kubhadhara mutero, kusaina inosunga zvibvumirano, uye kuchengetedza varidzi varo kubva kubhizimusi uye zvemari mutoro. Kune akatiwandei akasiyana mamodheru emamodeli ayo muridzi webhizinesi angasarudze, zvinoenderana nekuti ndezvipi zviri pamutemo nemitero zvinoshanda zvakanyanya kune izvo zvinodiwa nekambani yake.
Kusingakwanisi Kubata Ushamwari
Yakatengwa Dhiza Kambani
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve ese ari maviri asina kubatanidzwa uye akaisirwa masisitimu ebhizinesi isu takapa ruzivo rwakadzama pamusoro pezvinhu zvinozivikanwa mune edu Mhando dzebhizinesi chikamu.
Sole Proprietorship inotsanangura iri nyore bhizinesi chimiro icho chiri chemunhu. Mabhizimusi mazhinji madiki anoshanda seSole Proprietorship (semuenzaniso, rako chairo "amai nepop" chitoro, shangu chitoro, nezvimwewo); zvisinei, kumwe kwekukanganisa kukuru kwechimiro ichi ndechekuti muridzi pachezvake ndiye anozvidavirira kune ese emutemo uye emari zvikwereti. Mhosva ine chekuita nebhizinesi kana IRS mutero kuongorora kunoisa varidzi zvinhu zvavo panjodzi yekubatwa. Kupfuurirazve, mari yese yebhizimusi inobhadhariswa semari inowanikwa nemunhu muridzi. Kunyangwe bhizinesi richisarudza kushandisa zita rekutengeserana (kana "DBA," nezvimwe - chero zita rekutengeserana rinofanira kunyoreswa nemunyori wedhorobha / guta pane bhizinesi iri), hapana iko kupatsanurwa zviri pamutemo muridzi kubva kubhizimusi sezvazvingaitwe nemamwe marudzi ezvivakwa zvebhizinesi.
Kubatsira kweSole Proprietor
Zvishoma Pamutemo Zvinorambidzwa
Mari inowanikwa pamusoro peMutero wemitero inodzoka
Kukanganisa kweSole Proprietor
Isingagumi Yemunhu Chikwereti kune Zvikwereti uye Zvikwereti zveBhizinesi
Muridzi anogona kurasikirwa nezvinhu zvake mune bhizinesi mhosva
Bhizinesi rinoguma parufu rweMuridzi
Yakatemerwa Kukwanisa Kusimudza Mari
A General Kudyidzana inobvumira mapato maviri kana anopfuura kugoverana mukuremerwa uye purofiti yekambani. Iwo mapato anogona kukanganiswa nemasangano, vanhu vamwe, kumwe kudyidzana, matirastii, kana chero mubatanidzwa wacho.
Kubatsira kweGeneral Kudyidzana
Zvemari neManejarial Simba reVamwe Partner zvinogona Kushandiswa
Kukanganisa kweGeneral Kudyidzana
Iwo maPartner akafumurwa kuzvikwereti zvisingagumi zvezvikwereti zviri pamutemo uye zvemari zvebhizinesi
Chikwereti chakakonzerwa kana kukonzerwa nemudiwa mumwe chinosiya vese vadyidzani vari panjodzi yekutorwa kwebhizinesi uye zvemunhu pfuma
Bhizinesi rinorega kuvapo kana pakafa Partner (mune zviitiko apo kuronga kwekuenderera kwebhizimusi kusipo)
Vabatsiri vanokwanisa kuita bhizinesi kuzvisungo pasina mvumo kubva kune vamwe vadyidzani
Iyo Yakabatana Kudyidzana (LP) bhizinesi dhizaini inogadzira yakaparadzaniswa yepamutemo sisitimu iyo inosanganisira mumwe kana vazhinji vevazhinji vanobatirana uye mumwe kana vamwe vashoma vashoma. Ava vashoma vanobatirana vanowanzoisa mari mubhizinesi uye vane muganho mukukweretwa kwavo zvakaenzana nemari yemari yavanodyara. Iye mukuru wepamberi (s) anotonga mashandiro eiyo kudyidzana uye pachezvake ane mhosva kune ayo zvisungo uye zvikwereti. Kambani inowanzoiswa munzvimbo yevamwe mudiwa kuti itore chikwereti. Vazhinji vhoti yevavhoti vadyidzani, kunze kwekunge zvataurwa neimwe chibvumirano chakanyorwa, inogona kuchinja kuti ndiani anoshanda semubatanidzwa wese
Kana mumwe mukwikwidzi akamhan'arwa pachezvake uye kupihwa mutongo, kufarira kwakatemwa kwemumwe mudivi reKubatana Kwekudyidzana kunochengetedzwa kubva mukutorerwa sezvakaita chero zvinhu zvakachengetwa neiyo Kudyidzana Kudyidzana. Nekuda kwekudzivirirwa uku, Kudyidzana Kudyidzana kunowanzo shandiswa zvinobudirira kudzivirira zvinhu kubva kune vane chikwereti.
Zvakanakira Kudyidzana Kudyidzana
Iyo midziyo iri mukati mehukama hushoma inogona kudzivirirwa kubva pakubatwa kana mumwe mudiki akarasikirwa nematare.
Iyo purofiti inoitwa neiyo Yakabatana Kudyidzana inongotaurwa pane avo vanobatirana 'emunhu mutero anodzoka
Iwo Akatemerwa Partner anodzivirirwa kubva kuchisimba mune bhizinesi mhosva
Nechibvumirano chakakodzera chekudyidzana, hapana chivharo pamari yemari iyo vese vanobatana vanogona kutora kubva mubhizinesi.
Kudyidzana Kudyidzana kunogona kuve yako pfuma, kumhan'ara, uye kumhan'arirwa nekuda kwenzvimbo yavo sebato repamutemo rakaparadzana
Iko Kudyidzana Kudyidzana kunoda zvimwe zvinyorwa zviri pamutemo kupfuura General Kudyidzana
Iyo General Partner mapfudzi chikwereti, saka inoda chimwe chinhu, senge mubatanidzwa, kuti ishande mune ino chinzvimbo
A limited Liability Partnership (LLP) inowanzo shandiswa mune zvehunyanzvi maitiro akadai semutemo, accounting nekuvakwa. Rudzi urwu rwemasangano epamutemo akasarudzika anotendera kuchengetedzwa kwemutoro kune vese vanobatana, pamwe nekodzero dzevatariri. Muzviitiko zvakawanda iyo Yakatemerwa Chikwereti Kudyidzana inopa mukana wakaenzana wakatarwa unowanikwa muComputer. Nezvinangwa zvemitero, iyo Yakatemerwa Chikwereti Kudyidzana kuri kuyerera-kuburikidza nesangano senge Kudyidzana.
Iyo Yakatemerwa Chikwereti Kudyidzana inopa mamiriro epamutemo kutanga kwebhizinesi
Iwo Akatemerwa Partner anodzivirirwa kubva kune chinosungirwa nekambani mukuti chikwereti chavo chinoenderana nemari yemari yavanodyara
Marovero akabhadharwa kune avo vaunofambidzana navo anoziviswa pane avo vavanodzosera mutero
Iko hakuna kudikanwa kwekuseta zuva rekumiswa kwechibvumirano chekudyidzana
Yakatemerwa Chikwereti Kubatana kunogona kuve yako midziyo, kumhan'ara, uye kumhan'arwa nekuda kwenzvimbo yavo sebato repamutemo rakaparadzaniswa
Iyo Yakatemerwa Mutoro Kudyidzana inoda mamwe magwaro epamutemo pane kutaura General Kubatana nekuda kweayo 'chinzvimbo sesangano repamutemo
Iyo bhizinesi inoonekwa seinopunzika kana Iyo Yakatemerwa Dhiza Partnerhip inorasikirwa nemumwe
Mune mamwe matunhu chete nyanzvi, senge magweta, vagadziri uye maakaundi vanogona kushandisa irwo rudzi rwechinhu.
Iyo Yakatemerwa Liability Kambani ("LLC") ine yekudzivirira kumatare mabhenefiti eKambani uye iyo yekudzivirirwa kweaseti mabhenefiti eiyo Yakabatana Kudyidzana. Zvikwereti Zvikwereti Makambani zvinosanganisa chikwereti chakatemerwa chinowanikwa mumakambani uye mamiriro emutero weSole Proprietor kana Partnership, pahungwaru hwevaridzi. Mumwe anogona zvakare kusarudza kuve neiyo LLC mutero seC mubatanidzwa kana S mubatanidzwa. Mune Kambani Inodzvinyirira Kambani, varidzi vacho vanonzi "nhengo."
Kana iyo LLC ikamhan'arirwa, gadziriro dzemutemo dzinoenderana nehunhu hwayo sesangano rakasiyana repamutemo rinodzivirira nhengo dzacho kubva pachisungo. Kana nhengo dzamhan'arwa pachadzo, zvirevo zvinodzivirira iyo LLC uye midziyo irimo kubva mukubatwa nevanokweretesa. Nekuda kwemabhenefiti aya, Kambani Inodzvinyirira Kambani inowanzo shandiswa kuve neinvestment real estate uye kuchengetedza nhengo dzevashandi vakasiyana siyana veMakambani emahara makuru (accounting, mutemo, nezvimwewo).
Kubatsira kweKushoma Zvikwereti Makambani
Inodzivirira midziyo yekambani kana nhengo dzamhan'arwa
Inodzivirira nhengo kana kambani yakamhan'arwa
A limited Liability Company inogona kuumbwa nenhengo imwe kana dzinopfuura
Nhengo dzeS LLC dzinogona kusarudza mumwe munhu, kana chinzvimbo kutarisira kambani
Chibvumirano chekushanda chinotonga iyo Yakatemerwa Dhizaina Kambani
Iyo Yakatemerwa Dhizaina Kambani inogona kazhinji kunakidzwa Nokusingaperi Nguva kunze kwekunge zvataurwa neimwe nzira muzvinyorwa zvesangano
Kukanganisa kweKushoma Zvikwereti Makambani
Sesangano repamutemo, iyo Yakatemerwa Dhizaina Kambani inoda magwaro epamutemo kupfuura zvaizowanikwa muSole Proprietorship kana General Kudyidzana.
Sangano rinotarisirwa nemutemo kuita senzvimbo yepamutemo kana "munhu" akaparadzaniswa nevaya varidzi kana vanoridzora. Sangano rinogona kufaira mutero kungave seC-Corporation, kana seS-Corporation. Iyo S-Corporation yaimbove C-Corporation iyo inoteedzera IRS fomu 2553 kusarudza yakasarudzika mutero chinzvimbo. Iyo S-Corporation inodarika-kuburikidza nemutero, inogumira pakati pe75 ne100 kana vashoma vanogovana (zvinoenderana nenyika yayakaumbwa mairi), uye haigone kuve nevasiri vagari vekuUS vagovana. C-Corporations inogona kuve nenhamba isina muganho yevanogovana, vanobvumidzwa kuve US uye / kana vasiri vagari vemuUS vagovana, uye vanobhadhariswa mutero pamubhadharo wemambure. C-mubatanidzwa inogona kubvisa vashandi mari yekurapa uye inishuwarenzi.
Makambani ese ari maviri eC uye S anogona kunge aine hurongwa hwepenjeni. Mari inobhadharwa muhurongwa hwepenjeni inobvisirwa mutero kune iyo mubatanidzwa uye isina mutero kune mushandi. Mari iri mukati mechirongwa chepenjeni inogona kukura isina mutero kudzamara yabviswa pamudyandigere.
Ivo vagovana (varidzi) veSangano vanodzivirirwa kubva pachisungo bhizinesi parinomhan'arwa
Nguva dzisingaperi dzeKambani kunze kwekunge zvataurwa neimwe nzira muSitifiketi cheInorporation
Varidzi vane chikwereti chavo chinogumira pamari yavakabhadhara muchikamu chavo chemasheya
Iko mashandiro eSangano haana kukanganiswa nekutamisirwa kwemasheya, kana kufa kwemugovani
Makambani anogona kuve nemidziyo, kumhan'ara, uye kumhan'arwa nekuda kwenzvimbo yavo sebato repamutemo rakaparadzaniswa
Zvishoma zvinyorwa zvinyorwa
Kunyoresa nehurumende kunyoresa
Kana yangoiswa, pane matanho mashoma anobatsira kutora anogona kubatsira munhu kunakirwa nezvakanaka zvekambani. Semuenzaniso, kuwanikwa kweiyo Federal Mutero ID kubva ku IRS idanho rakakosha. Kana uchinyora seS-Corporation, iyo IRS fomu 2553 inofanirwa kumiswa pamberi pezuva regumi nematanhatu remwedzi wechitatu wegore remutero kuti sarudzo dziitwe, kana chero nguva mukati megore remutero uchienderera mugore remutero iyo S- Corporation inofanira kutanga kushanda. Mushure mekutambira iyo Federal Mutero ID nhamba, zvinyorwa zvekubatanidzwa, uye chitupa chakamisikidzwa nehurumende, rakasiyana bhangi account rinofanirwa kumisikidzwa yebhizinesi, nekunzwisisa kuti "kubatana-kusangana" kwemunhu uye mari yebhizinesi haifanire kuitika. Kuchenjerera kunofanirwa kutorwa kuti chero magwaro ekutevera aunzwe kuhurumende sezvazvinodiwa, senge runyorwa rwemaofficial uye madhairekitori, uye kuti munyori anopihwa uye anoitwa kuve nehanya neCorporate Minute. Kana zvichidikanwa, ita shuwa yekuwana rezinesi rebhizinesi mudunhu mune iyo kambani inoshanda. Iri izano rakanaka kuve nehunyanzvi mutero uyo ane ruzivo mukushandira accounting anogadzirira zvinodiwa mutero mafirita Pazasi pane pfupiso yezvinhu zvakakosha zvekurangarira mushure mekunge kambani yako yaendeswa:
Wana Federal Federal Chitupa Chiziviso
Gadzira S-Corporation kudomwa kana zvichidikanwa
Vhura kambani account account
Faira anodiwa ekuteedzera magwaro senge runyorwa rwevakuru nevatariri, kana zvichidikanwa
Bvunza nyanzvi yemitero kanenge pagore